I-SAT Score Ukuthelekiswa kweeKholeji zoBugcisa boLwazi oluPhambili
Ukuthelekiswa kobucala-nge-Side ye-Top College Admissions Data
Ukuba uyazibuza ukuba unayo izikolo ze-SAT uzakufuna ukungena kwelinye leekholeji zobuninzi bobugcisa e-United States, nantsi uqulethe ohlangothini lwamacandelo abafundi abaphakathi ababhalisiweyo. Ukuba amanqaku akho awela ngaphakathi okanye ngaphezulu kwezi zigaba, ujoliswe ekujoliswe kuyo kwelinye leekholeji eziphezulu.
I-Top Liberal Arts College I-SAT Score Ukuthelekiswa (phakathi kwama-50%)
Amherst College 680 775 680 780 - - ubone igrafu
ECarleton College 660 770 660 770 - - ubone igrafu
ICginnell College 640 750 680 780 - - ubone igrafu
College of Haverford 660 760 660 760 - - ubone igrafu
KwiKholeji yaseMidbury 630 740 650 755 - - ubone igrafu
Ikholeji yasePomona 670 770 670 770 - - ubone igrafu
KwiKholeji yaseSwthmore 645 760 660 770 - - ubone igrafu
Wellesley College 660 750 650 750 - - ubone igrafu
IYunivesithi yaseWesleyan - - - - - - ubone igrafu
College College 670 770 660 770 - - ubone igrafu
Qaphela, ke, ukuba izikolo ze-SAT ziyingxenye enye yesicelo. Zonke iikholeji zobugcisa be-liberal ziyakwamkelwa ngokupheleleyo , ngoko ke amagosa angenayo aya kuzama ukukwazi wena njengomntu opheleleyo, kungekhona njengendlela yokulinganisa okulinganayo kwamanqaku okuhlolwa kunye namabanga. I-800 epheleleyo kwi-SAT ayiqinisekisi ukuba kwamkelwa ukuba ezinye iinxalenye zesicelo sakho zibuthathaka, kunye neenombolo ezingezantsi kwetafile apha ngasentla ukuba zingavumeli ukufakwa ukuba unamandla kwezinye iindawo. Kubalulekile ukuba ukhumbule ukuba ama-25% abafundi abavunyelweyo bafumana izikolo ze-SAT ngaphantsi kweenombolo eziphantsi kwetafile.
Okokuthi, amathuba akho wokumkelwa aya kuba ngcono xa izikolo zakho ze-SAT zingaphakathi okanye ngaphezulu kweendawo eziboniswe ngasentla, kwaye ezinye izicwangciso zesicelo sakho nazo ziqinileyo: irekhodi elomeleleyo lemfundo , isicatshulwa esiphumeleleyo , imisebenzi enentsingiselo yexesha elithile , kwaye iincwadi zokucebisa . Kwiimeko ezininzi, ukubonisa umdla kungabamba indima ekulinganisweni kokulingana.
Siphakamisa ukuba abafakizicelo bahlale banethuba lokungeniswa kwezi kholeji eziphezulu ngokufanelekileyo. Uninzi lwalezi zikolo zinamanani okwamkelwa kwabaselula, kwaye abafundi abaninzi abanamabanga kunye neziphumo zokuvavanya ezijoliswe ekumiselweni ziya kukhishwa.
Ukuba ucofa kwigama elingentla ngasentla, uya kuphrofayli yokuvuma apho ungayifumana amanani amaninzi admissions kunye nolwazi lweendleko kunye nolwazi lwezezimali.
I-"sibone igrafu" ikhonkco iya kukusa kwigrafu yeGPA, i-SAT kunye ne-ACT idatha yabafundi abaye bayavunywa, bayalila kwaye balinde uludwe.
I-SAT Itheyibhile Ukuqhathaniswa Kwamkelwa kwiiKholeji ze-Colorado
Umyinge weSizwe weSAT izikolo ze-2014
Umzi weMbali yeMbali (i-Capra hircus)
Inyoka enkulu kunazo zonke emhlabeni - Anaconda obulewe e-Amazon?
Afrika baseMelika kwiNkqubela yeeNkqubela